KACHINSTATE.NEWS ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: KACHINSTATE.NEWS ကချင်ပြည်နယ်သတင်း
ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIO) တပ်မဟာ (၅) လက်အောက်ခံမှ တပ်ကြပ် ကျော်ဆန်း ခေါင်းဆောင်သော တပ် ဖွဲ့ဝင် ၃၅ ယောက်သည် မြစ်ကြီးနား မြို့နယ် တာလောကြီး နယ်မြေရှိ တပ်မတော် စခန်းသို့ ဧပြီ ၁၆ ရက် နေ့က လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ် မျိုးစုံဖြင့် လက်နက်ချ ခဲ့သည်ဟု (FNG) သတင်းအရ သိရှိ ရပါသည်။
အလားတူ ယမန်နေ့ ဧပြီလ (၁၇) ရက်နေ့တွင်လည်း KIAတပ်ဖွဲ့ဝင် (၂) ဦးသည် မြစ်ကြီးနားမြို့ တပ်စခန်းသို့ လည်းကောင်း၊ ည နေပိုင်းတွင် တပ်ဖွဲ့ဝင် (၅) ဦးသည် တာလောကြီး တပ်စခန်းသို့ လည်းကောင်း ထပ်မံ ၀င်ရောက် လာခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄၂ ဦး လက်နက် ချခဲ့ကြကြောင်း သတင်းက ဆိုပါသည်။
ရှေ့တန်း စခန်းတနေရာ (ဓါတ်ပုံ KIA)
မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်မှာ ၂၀၁၁ ဇွန်မှစ၍ တပ်မတော် စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှ ကချင်အရာရှိ ၊စစ်သည် ၃ဦး အား အကြောင်းမဲ့ ဖမ်းဆီးခဲ့ရာမှ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာသည့် KIA နှင့် မြန်မာ စစ်တပ်ကြား ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲများသည် တ ဖြည်းဖြည်းအ ရှိန်မြင့် လာခဲ့ကြပါသည်။
တိုက်ပွဲများကြောင့် အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူများ၊ ဒုက္ခသည်များ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်ဟု KIO ဖက်က ပြောဆိုခဲ့သလို မြန်မာစစ်တပ်မှ အရာရှိ တစ်ဦးကလည်း ဒုက္ခသည်များသည် KIO မိသားစုဝင်များ သာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
KIA ၏မြေပုံ စစ်ဆင်ရေး သင်တန်းပြကွက် တခု (ဓါတ်ပုံ - KIA)
ယခုဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲတွင် မြန်မာ စစ်တပ်၏ ပိတ်ဆို့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပွားနေသလို KIA၏ ခံစစ်အားကောင်းမှု ကြောင့်လည်းကောင်း၊ နယ်မြေ စိုးမိုးရေး ကျွမ်းကျင်မှုတွေကြောင့် လည်းကောင်း နှစ်ဖက်စလုံး ထိခိုက်မှု များပြား သည်ဟု ဆို ပါသည်။
အစိုးရနှင့် KIO တို့သည်၊ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် အကြိမ်ကြိမ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ တိုက်ပွဲများသည်၊ နိုင်ငံရေးပြသနာ ၏နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည်၊ နိုင်ငံရေး အရ ဆွေးနွေးမှု ပြေလည်ပါက အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးသည်လည်း ရပ်တန့်မည်ဟု KIO ဖက်မှ ရပ်တည်သလို၊ အပစ်ရပ်ပြီးမှ နိုင်ငံရေးအရ ဆက်ဆွေးနွေးလို့ ရမည်ဟု အစိုးရ ဖက်က သဘောထား ခဲ့သည့်အတွက် အခုချိန်ထိ မပြေလည်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
14.4.2012 ည9း00နာရီအချိန် အေးမြသာယာနှင့် အေသင်ကြား၊မီးရထားသံလမ်းအနီး လူသူမရှိလယ်ကွင်းစပ် တွင်ပေါက်ကွဲ မှုဖြစ်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မထိခိုက် ဟုသိရ။ ထိုအချိန် တွင်
အထက(၁) ရှေ့ လမ်းများပိတ် ဦးစခုံ တိန့်ယိန်း မဏ္ဍပ်မှလွဲ၍ ကျန်မြစ်ကြီးနား မဏ္ဍာပ်များ ရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ရ ပြည်သူများကြောက်လန့်တကြားမိမိအိမ်တို့ ပြန်ကြကြောင်း တွေ့ရသည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။ kachinstate.news@gmail.com
မြစ်ကြီးနား ဗုံးကွဲသတင်းတွေမှားနေလို့ ဓါတ်ပုံလေးနဲ့တင်ပြတာ
မေးလ်မှ.........2လပိုင်း လိုင်ဇာဂိတ်အ၀င်မှာအသက်(၆၃)နှစ်အရွယ် အဖွားအိုကို ဖမ်းပြီးအချုပ်15ရက်ချ နယ်နှင်လိုက်တဲ့ တို့...သတ္တိခဲ မဟာ အညစ်ပတ်တော် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် အမည်ခံ KIA
လဂျားယန်မှာ မအေးချမ်းတော့ လူတွေလဲဒုက္ခသည်စခန်းရောက်တဲ့သူတွေရောက် တောင်ပြေးမြောက်ပြေးနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်း မှဆွမ်းကွမ်းအခက်အခဲရှိနေတယ်လေ ရှိတဲ့အရွက်ကိုရေလုံပြုပ်သောက်နေတယ်
တကာမ ဖြစ်သူက စိတ်မကောင်းဖြစ်သဒ္ဒါစိတ်တွေကြောင့် လိုင်ဇာ မြို့တက်ဈေးဝယ်တော့တာပေါ့ ၀ယ်ပြီးအပြန်မှာ လိုင်ဇာ ဂိတ်အ၀င်မှာ သုံးဘီးကိုတား စစ်ဆေးတော့တာပဲ
စစ်တော့ ၀ယ်လာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုစစ်တပ်အတွက်မဟုတ်လားမေးတော့ အဖွားက မဟုတ်ရပါဘူး
ဆရာတော် အတွက် ဆွမ်းကပ်ဖို့ပါတောင်းပန်တယ် ဒါပေမဲ့ဒိဌိငနဲ အယုတ်တွေက အဖွားကြီးမလိမ်နဲ့ ဆိုပြီးကြိမ်းမောင်းတယ် ဒါနဲ့ဆရာတော်ဖုန်းနံပါတ်ပေးပြီးဆက်ခိုင်းတယ် ဆရာတော်က
ဟုတ်ပါတယ် ကျောင်းရှိသံဃာတော်တွေအတွက်ဆွမ်းချက်ဖို့ပစ္စည်းတွေပါပြောတယ် ဒါလဲမရဘူး
နောက်16မြောက်လောက်တော့ အဘွားကိုကားနဲ့တခြားမြို့ကိုထည့်လိုက်တယ်လေ ဒီကိုပြန်လာရင်သတ်မယ်တဲ့..................ခံယူချက်တွေနက်ရှိုင်းလိုက်ပါဘိ မဟာတွေရယ်..လို့စိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်မိပါတော့တယ်ဗျာ။
Posted by နေနိုင် မင်း at 8:13 AM
New Generation for free
ကိုကျော်စွာငြိမ်း = ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။
photoshop သင်ခန်းစာ များလေ့လာနိုင် ပါသည်။ ..
PHOTOSHOP ROAD MAP = photoshop လေ့လာရန်။
မျိုးဇော်လင်း = graphic design
ကွန်ပျူတာပညာရပ်များအပြင်၊ Network ပညာများကိုလည်းသင်ယူနိုင်သည
မိမိဓါတ်ပုံတွေကို ဘောင်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အလှပြုပြင်နိုင်တဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပိုတိုဆောဖ့်ဝဲလ်တွေပါ
CAD MYANMAR = အော်တိုကတ်နည်းပညာများလေ့လာရန်။
ENGINEER4MYANMAR အော်တိုကတ်လေ့လာရန်။
CHAN 2009 = အော်တိုကတ်လေ့လာရန်။
MYANMAR DIGITAL ART SOCIETY= ဓါတ်ပုံနည်းပညာများလေ့လာရန်။
Myanmar Express News
Open Source စနစ်ကိုလေ့လာသူများ မဖြစ်မနေ၀င်လေ့လာသင့်သည်
စုံလင်တဲ့ Free Software ဆိုဒ်ပါ ။ လိုတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုသာ နာမည်ရိုက်တဲ့ပြီးရှာလိုက်ပါ
Language များစွာကို စိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီး လွယ်ကူစိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီးလွယ်ကူသုံး ချ အခမဲ့ရသော mail
ရိုးရာ=myanmar cg art gallery
MYANMAR LENS MAN မြန်မာ့ဓါတ်ပုံပညာများလေ့လာရန်။
WEB DESIGN HTML AND CSS
WINDOW INSTALLATION (မြန်မာ)
COMPUTER DICTIONARY (အင်္ဂလိပ်)
MS POWER POINT 2002
LEARNING CSS- 2
Myanmar Book ..
*Myanmar E library *
Online myanmar ebook
Myanmar Online Book Store
မြန်မာအီးဘွတ်များကို တစ်စုတစ်စည်း တစ်နေရာထဲမှာ ဒေါင်းလုပ် လုပ်နိုင်ရန
ရက်စွဲ October (1) August (1) July (2) June (4) May (2) April (8) March (2)
http://kachinstate.news.com/. Watermark theme. Powered by Blogger.